နံမည်ကြီး မော်ဒယ် | CeleTrend
July 22, 2020 by CeleTrend
ကြီးမုန်းသည် သူ့ညီဇော်ဇော် နဲ့ သူ့ကွယ်ရာမှာ တိတ်တဆိတ် ကမြင်းတဲ့ ဟံသာစိုးထွဋ် ကို ဆုံးမ မှ ဖြစ်မည် ဆိုပြီး ဟံသာစိုးထွဋ်ကို သူတို့ တခါတရံ ချိန်းတွေ့တတ်တဲ့ လှည်းကူးက သူ့ခြံထဲကို ခေါ်သွားသည် ..။ ဟံသာစိုးထွဋ်ကတော့ ကြီးမုန်း သူ့ကို မကျေနပ်ဖြစ်နေတာကို မသိ ..။ မရိပ်မိ …။ ကြီးမုန်း ရဲ့ အကြံအစည်က နံမည်ကြီးနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဟံသာစိုးထွဋ်ကို အရှက်ခွဲပစ်ဖို့ ..။ တကယ်တော့ စောစောထဲက ကြီးမုန်း ရာဟုကို ပြဖို့ ဆိုပြီး ဟံသာရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး ပုံတွေကို ခိုးရိုက်ထားခဲ့သည် ။ ဟံသာကို အရှက်ခွဲဖို့ ဒီပုံတွေကို အင်တာနက် တင်လိုက်နိုင်သည် ..။ ဒါလောက် နဲ့ အားမရသေးဘူး …။ ကြီးမုန်းသည် သူ့ကို တပတ်ရိုက် ကျောချင်တာမျိုး လုံးဝ လက်မခံဘူး …။ ဟံသာကို သူ့တပည့်ချွတ်တား နဲ့ လွှတ်ပေးပြီး ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး အင်တာနက် တင်ဖို့ သူ ကြံစည်ထားတာ …။
ချွတ်တားက ရုပ်က စုတ်ပြတ် ရွတ်ထေပြီး လီးကလဲ ကြီးသည် ..။ မဲမဲသဲသဲ ချွတ်တားနဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး နံမည်ကြီး မော်ဒယ် ဟံသာတို့ ဖြုတ်မယ့် အောကားက အင်တာနက်အောဆိုက်တွေမှာ နံမည်ကြီးမှာ သေချာသည် ။ ဒီခြံထဲကို ချွတ်တားကိုလည်း ကြိုတင် ခေါ်ထားပြီးပြီ ..။ ချွတ်တား ဖြုတ်တာကို ဟံသာက လွယ်လွယ်နဲ့တော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး ..ဆိုတာကို ကြီးမုန်းသိသည် ..။ ချွတ်တားကို ဟံသာလက်မခံရင် အတင်းဖြုတ်ဖို့ သူ ကြိုတင်မှာကြားထားပြီးသား ..။ ချွတ်တားက “ ကျနော် ကျင့်ပစ်မယ် ဆရာ …” လို့ သူ့ကို ၀မ်းသာအားရ ပြောပြီးသား …။ ဟံသာ့ကို ၀ိုင်တိုက်သည် ..။ ဟံသာကြိုက်တဲ့ ၀ိုင်ကို တိုက်တာ ..။ဟံသာ မူးလာမှ ချွတ်တားနဲ့ တွေ့ပေးမလို့ ကြံစည်တာ …။ ဟံသာက ၀ိုင်နှစ်ခွက်လောက် ၀င်ပြီးတဲ့အချိန် ကြီးမုန်းကို ပွတ်သီးပွတ်သပ် လာလုပ်သည် ..။
“ ကိုကြီး …ဟံသာ မှုတ်ပေးရမလား …” “ အင်း …” ဟံသာ က ကြီးမုန်းရဲ့ ခါးက ခါးပတ်ကို ဖြုတ်သည် ..။ ဒီအချိန်မှာ ကြီးမုန်းရဲ့ ဖုန်း က ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်မြည်လာသည် …။ ကြီးမုန်း ဖုန်းကို ယူကြည့်လိုက်သည် ..။ ဟင်..အံ့မင်းခိုင် ခေါ်တာ ….။ “ ဟေး..အံ့မင်းခိုင် . .ပြော…ဘာထူးလဲ …..” “ ထူးတယ်…ထူးတယ်..အရမ်းထူးတယ် ….” “ဟင် ….ဟုတ်လား…ပြော…ပြော …ဘာထူးလဲ…” “ ဟားဟားဟား..ကိုကြီးမုန်းရယ် ….၀မ်းသာတော့ဗျာ…ရှားဆီက သတင်းရတယ် …ကိုကြီးမုန်း ရှာနေတဲ့ ဟာကြီး ..ရှိနေတယ်ဗျ…ဟားဟား…ရှိနေတယ် …” “ဟာ…..ဟားဟားဟား…….ဟုတ်ပြီ…ဟုတ်ပြီ …ကောင်းလိုက်တာ အံ့မင်းခိုင်ရေ . ..” “ ရှားက မကြာခင် အလုပ်ဖြစ်မယ်…တဲ့ ကိုကြီးမုန်း မန်းလေးကို လာခဲ့ကြပေတော့ ….” “ အိုကေ..အိုကေ ……ဟားဟားဟား….” ကြီးမုန်းသည် ပုလွေကိုင်ပေးမယ့် ဟံသာ့ကို တွန်းဖယ်ပစ်လိုက်သည် ..။
ဟံသာ့ကို ချွတ်တားနဲ့ အပြာကား ရိုက်ဖို့ ကိစ္စကိုလည်း ကြီးမုန်း သတိမရတော့ဘူး ..။ ဟံသာကိုလည်း လက်စားမခြေချင်တော့ဘူး …။ သူလိုချင်နေတဲ့ စိန်ကြီး ….ရှိနေတယ် ဆိုတာက သူ့အတွက် မဟာ သတင်းကောင်း တခု …။ “ ကိုကြီး…ဘာတွေ ပျော်နေတာလဲ..ဟံသာ့ကိုလဲ ပြောပြအုံး ….” “ အလုပ် အဆင်ပြေလို့ ဟံသာ…ကဲ…ကိုကြီး တို့ ပြန်ကြရအောင် ….” “ တခုခု သွား စားကြမှာလားဟင် ….” “ စား..စား..ဟံသာ..ဟံသာ စားချင်တာ အကုန် ကျွေးမယ် ….” ကြီးမုန်း ဇော်ဇော့်ကို ဖုန်းခေါ်သည် ..။ ဇော်ဇော်လဲ အရမ်း ၀မ်းသာသွားသည် …။ “ ကဲ..ဇော်..ညီလေး…လူတွေ အားလုံး စုကွာ …ကိုကြီးတို့ မန်းလေး တက်မယ် …ဖြိုးဝေမိုး ကို တွယ်ပစ်မယ် …ဒို့ လိုချင်တာ ကို အရယူမယ် …..” ကြီးမုန်း ရွှေနဂါးမှာ ဟံသာနဲ့ ထမင်းစားနေတုံး ဇော်ဇော် ဖုန်းပြန်ဆက်သည် ။
ဦးလဗျ ..ပယင်း နဲ့ မျိုးကိုကို ကလွဲပြီး လူအားလုံး ကွန်တက်ရသည်တဲ့ …။ဒီသုံးယောက် တော့ ပျောက်နေသည် ..။ ကွန်တက် လုပ်လို့ မရဘူး ….တဲ့ ..။ “ ဟေ ….ဒါဆို ရှားရဲ့ ကော်ဖီဆိုင် ကရော …” “ ဆိုင်ပိတ်ထားတယ် ….” “ ဟေ …” ဒီသုံးယောက် ဘယ်ရောက်သွားလဲ …။ ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလဲ …။ ရာဟုလဲ ပျောက်နေသည် ….။ အထူးစစ်ဆင်ရေး ဌာနခွဲရဲ့ စစ်ကြောရေး အခန်း …။ ပြူတင်းပေါက် မရှိတဲ့ အုတ်နံရံလေးဘက် နဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲ စားပွဲတလုံး ကုလားထိုင်နှစ်လုံး ရှိနေသည် ..။ နံရံက ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ ကျနေတဲ့ မီးအုပ်ဆောင်းနဲ့ မီးတပွင့် ရှိသည် ။ စားပွဲက သံမဏိစားပွဲ ..။ သံမံတလင်းကြမ်းပြင်နဲ့ တွဲထားတဲ့ စားပွဲ ..။
ကုလားထိုင်တွေကလည်း ဒီလိုဘဲ ..။ကြမ်းပြင်နဲ့ အသေတွဲထားသည် ..။ ရာဟု ( ခေါ် ) နေနတ်မင်း ..စားပွဲ နဲ့ တွဲပြီး လက်ထိပ် အခတ်ခံထားရသည် ။ အောက်သိုးသိုး အနံ့ကြီးက ပျို့အံချင်စရာ ကောင်းလှသည် ..။ တချိန်က နေနတ်မင်းသည် ဒီလို အခန်းထဲတွင် ဥပဒေဖေါက်ဖျက်သူ လူဆိုးသူခိုးတွေကို အကြိမ်ကြိမ် စစ်ဆေးခဲ့ဘူးသည် ..။ အခုတော့ သူကိုယ်တိုင် စွပ်စွဲခံရသူ တရားခံ လူဆိုးတယောက် အနေနဲ့ လက်ထိပ်ခပ်ခံရတဲ့ ဘ၀ကို ရောက်ရှိနေသည် ..။ စစ်ကြောရေး အခန်းလေးရဲ့ တံခါး ပွင့်လာသည် ။ ရာဟု ခေါင်းမော့ကြည့်သည် ..။ သေသပ်ကျနတဲ့ ရဲဝတ်စုံနဲ့ မယ်လီနီ လို့ ရာဟု သိထားတဲ့ နွေဥသြ …။ ရဲအုပ် နွေဥသြ ….။ နွေဥသြ အနောက်က ရဲမှူးဦးရန်နောင်စိုး …။ ရာဟုသည် ရဲမှူးဦးရန်နောင်စိုး နဲ့ ရဲအုပ်နွေဥသြ တို့မျက်နှာတွေကို မကြည့်ဘဲ ခေါင်းငုံ့ထားသည် ..။
ရဲမှူးဦးရန်နောင်စိုးက ..“ နေနတ်မင်း …နေနတ်မင်း…ငါ အတန်အတန် သတိပေးနေတဲ့ ကြားက မင်း ဇွတ် လုပ်ဖြစ်အောင်ကို လုပ်တယ် …ငါမင်းကို ဒီလို မဖြစ်ရအောင် တားခဲ့တာ ..” လို့ ညည်းသည် ..။ နွေဥသြ က စာရေးစက္ကူ တထပ် နဲ့ ခဲတံတချောင်းကို စားပွဲပေါ် ပစ်တင်လိုက်သည် ..။ “ နေနတ်မင်း ( ခေါ် ) ရာဟု …ခင်ဗျား လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှု လုပ်ရပ်တွေ အားလုံး ကို ကကြီး ကနေ အ ..အကုန် ချရေး ….ပြည်သူကို ကာကွယ်ဖို့ ထုတ်ပေးထားတဲ့ သေနတ် နဲ့ လူပစ်သတ်တာရော …မုဒိန်းကျင့်တာရော …အကုန် ရေးချ …..ဒါတွေ ရေးပြီးရင် ..ခင်ဗျားကို ထောင်ကြီးချုပ်ကို ပို့တော့မလို့ ….” ရာဟု ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျနေသည် …။ သူ့အမှားများသည် ပြင်လို့မရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်သွားပြီ ..။
သူပစ်သတ်လိုက်တဲ့ ဦးလဗျ ပွဲ ချင်း ပြီး သေသွားသည် ။ သူသည် မြေအောက်လောက ကို အသွင်ယူ ၀င်ထောက်လှမ်း ခါစတုံးက တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ ရဲအရာရှိတယောက်ပါ ..။ ကြာလာသောအခါ တံငါနားနီး တံငါ ဆိုသလို သူပေါင်းဖက်နေတဲ့ ဒုစရိုက်လောကသားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အကျင့်တွေ ကူးစက်သွားတာ ဖြစ်သည် ..။ ထောင်ထဲကို ရောက်မှာ သူ အရမ်းကြောက်နေသည် ..။ ထောင်ထဲမှာ သူ့ကို သိတဲ့ လူတွေ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်သည် ။ သူတို့ သူ့ကို ထောင်ထဲမှာ လက်စားချေကြ မလား ဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်က သူ့ကို အရမ်းကိုဘဲ ခြောက်လှန့်နေသည် ..။ နွေဥသြ သည် ရာဟု သူ့ကို ဆေးခပ်ပြီး အ၀တ်အစားတွေ ဖြဲစုတ်ပစ်တာကို တွေးမိတိုင်း ရာဟုအပေါ် စိတ်နာကျည်းနေသည် ..။ အိပ်ဆေးပျယ်လို့ သူ နိုးလာတော့ သူ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေသည် ။ သူသည် အဖုတ်တွေ ဖင်တွေ နို့တွေ ပေါ်ပြီး ပက်ပက်စက်စက် သတိမေ့ အိပ်ပျော်နေပေမယ့် နိုလာတော့ အဖုတ်က နာကျင်နေတာမျိုး မခံစားရလို့ သူ့ကို ရာဟု မုဒိန်းတော့ မကျင့်ဖြစ်သေးဘူး လို့ ယူဆသည် ။
သို့ပေမယ့် ဒီအဖြစ်အပျက်က နွေဥသြအတွက် အိပ်မက်ဆိုးကြီး တခုပါဘဲ ..။ အမြဲ ပြန်ပြန် သတိရမြင်ယောင်..အိပ်မက်တွေ မက် ..တညလုံး အိပ်မရတာတွေ ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန် ပြသရတဲ့ ဆေးကုသရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့သည် ..။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ရဲအုပ်တွေက နွေဥသြအတွက် စိတ်နာခံပြင်းကြလွန်းလို့ ရဲအချုပ်မှာ ရာဟု ရှိနေတုံး ထမင်း မကျွေးကြ ..။ အိမ်သာသွားခွင့် မပေးကြ ..။ ညဖက် မီးမှိတ်ပြီး ၀ိုင်း ကန်ကျောက်ထိုးကြိတ်တာတွေ လဲ လုပ်ကြသည် ..။ နွေဥသြကို မျိုးကိုကိုက ပယင်းနဲ့ တွေ့ပေးသည် ..။ ပယင်းက လက်ရှိ ကိုကြီးမုန်းတို့ လုပ်ရပ် နဲ့ အကြံအစည်တွေကို အားလုံး ဖွင့်ချ ပြောပြသည် ..။ ပယင်းက နွေဥသြကို မန္တလေးက သူဌေး ဦးဖြိုးဝေမိုးကို လုယက်တိုက်လိုက်ဖို့ လုပ်နေကြောင်းလဲ ပြောပြလိုက်သည် ..။ မန္တလေး ….။
“ ကိုကြီး..မကဲနဲ့ကွာ ….ဟင့်ဟင့် …..” ဦးဖြိုးဝေမိုးရဲ့ သဲမဲနေတဲ့ အနမ်းတွေ အကိုင်အတွယ်တွေ ကို ရှား အလူးအလဲ ခံနေရသည် ..။ “ ချစ်ရှားရယ်…ကိုကြီးက မနက်ဖန်ဆို မိုးကုတ် သွားရမှာ ဆိုတော့ ချစ်ရှားနဲ့ ရက်တော်တော်ကြာကြာ ခွဲနေကြရမှာလေ ..ဒါကြောင့် ….” ဦးဖြိုးဝေမိုးက ရှားကို နမ်းရင်း ရှားရဲ့ ထမိန်လေးကို ဖြေချွတ်ချလိုက်သည် …။ “ ကိုကြီးရယ်….အို ….ရှား …ရှား ….” ထမိန်အောက်မှာ ပင်တီ ခံဝတ်မထားလို့ ထမိန်လဲ ကြမ်းပေါ်ကို ကွင်းလုံးပုံ ကျွတ်ကျသွားရော ရှား ကိုယ်အောက်ပိုင်း တခုလုံး ဗလာကျင်း ၀င်းဝင်းပြောင်သွားပြီ ။ ဦးဖြိုးဝေမိုးရဲ့ လက်ညှိုးကြီးက ရှား အကွဲကြောင်းကို လိုင်းဆွဲ ပွတ်သပ်နေသည် ..။ ဂှားရဲ့ ထောင်ထနေတဲ့ အစိလေးကို ဦးဖြိုးဝေမိုးရဲ့ လက်ညှိုးက ဖိချေပေးနေသည် ..။
“ အင်ဟင်……အ….အ……..အ……အင်အင် ….” “ ရှား အင်္ကျီချွတ်လိုက်ပါလား ….” သူ့တုန်ရီနေတဲ့ အသံက ရှားအတွက် အမိန့်သံလိုဘဲ ..။ လက်တွေက အလိုလို အင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်မိသည် ..။ ဘရာစီယာ ချိတ်ကိုလဲ လက်နောက်ပြန်နဲ့ ဖြုတ်ပစ်လိုက်မိသည် ..။ ရှားရဲ့ ဖွံ့ထွား တဲ့ ရင်သားလှလှတွေ အ၀တ်မဲ့သွားတော့ သူ တအားပျော်သွားသလိုဘဲ ..။ မုန့်ဆာတုံး မုန့်တွေကို မြင်လိုက်ရတဲ့ ကလေးတယောက်လိုဘဲ ၀မ်းသာအားရ ရင်သားတွေကို ကိုင်တွယ်သည် ..။ နမ်းသည် ..။ ပါးစပ်နဲ့ ငုံစို့သည် ..။ “ အို…အို…….ဟင်…….ဟင်…ကိုကြီးရယ် …..အို ……..ဟင့်….” အိစက်ညက်ညောတဲ့ ဦးဖြိုးဝေမိုးရဲ့ ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ၀တ်လစ်စလစ် ဗလာကိုယ်နဲ့ ရှားသည် လှချင်တိုင်းလှနေပြီ ..။ ရမက်ဇောထန်နေတဲ့ ဦးဖြိုးဝေမိုးသည်လည်း ရှားလိုဘဲ ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်ဆိုလို့ ချည်တမျှင်တောင် ရှိမနေတော့ ..။
သူ့ ရှည်လျားတုတ်ခိုင်တဲ့ လိင်တန်ကြီးသည် သံမဏိချောင်းကြီးတချောင်းလိုဘဲ မာကျောတောင်မတ်နေသည် ..။ ရှားရဲ့ အဖုတ်သည် အရေတွေ တအားစိုလာပြီး ဦးဖြိုးဝေမိုး ချေနယ်မှုကြောင့် နို့စို့ပေးတာတွေကြောင့် ရှား စိတ်တွေ တအား ထကြွလာသည် ..။ ခံချင်စိတ်တွေ တအား ဖြစ်နေသည် ..။ ဦးဖြိုးဝေမိုးကလဲ ရှားပေါင်ကြားကို မျက်နှာထိုးအပ်လိုက်ပြီး ရှားရဲ့ အဖုတ်ကို ယက်နေပြန်သည် ..။ တကယ်တော့ သူ မယက်ခင်ထဲက ရှားသည် သူ စောစောက ဆွပေးတာတွေကြောင့် တအားကို ခံချင်နေတာ ..။ အဖုတ်ကို ယက်တော့ ရှားလဲ သူ့ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆွဲဆုပ်ထားမိပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ညည်းပစ်လိုက် အော်ပစ်လိုက်မိသည် ..။ တအားအားနဲ့ ရှား ရဲ့ အော်သံတွေ နဲ့ တပြတ်ပြတ် အဖုတ်ကို လျာပြားကြီးနဲ့ယက်တဲ့ အသံတွေ ဆူည့နေသည် ..။
ဦးဖြိုးဝေမိုးသည် အမွှေးရိပ်ထားလို့ ပြောင်တင်းနေတဲ့ ရှားရဲ့ အဖုတ်ကို ယက်လိုက် အစိလေးကို ငုံစုတ်လိုက် လျားနဲ့ ထိုးကလိပေးလိုက်နဲ့ လုပ်နေရင်း လက်တဖက်ကလည်း သူ့လိင်တန်ကြီးကို ပွတ်ချေနယ်နေသည် ..။ ရှားလဲ သူယက်ပေးတာကြောင့် တကိုယ်လုံး တုန်ခါပြီး ခံချင်လွန်းလာလို့..“ ကိုကြီးရယ်…ချစ်ပါတော့…ရှား မနေတတ်တော့ဘူး…” လို့ ဖွင့်ဟ ညည်းတွားလာရတော့သည် ..။ ဦးဖြိုးဝေမိုးသည် ဒီလို စောက်ဖုတ် ကို အငမ်းမရ ယက်လိမ့်မည်လို့ မထင်ရဘူး ..။ အခုတော့ ရှားကို ဇော်ဇော့်လိုဘဲ ကောင်းကောင်း ချစ်ပေးမယ့် သူကြီး ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရတော့ သူ့ကို ရှား တအား သဘောကျသွားသည် ..။ သူ့ကိုလည်း ပြန် ပြုစုပေးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာပြီး သူလဲ အဖုတ်က မျက်နှာခွာဖယ်လိုက်ရော ရှားက..“ ကိုကြီးကိုလဲ ရှား နမ်းပေးချင်တယ် …” လို့ ပြောလိုက်သည် ။
ဦးဖြေိုးဝေမိုးကို ပက်လက် နေခိုင်းပြီး မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့လိင်ချောင်းကြီးကို ရှား ငုံစုတ်လိုက်သည် ..။ ဇော်ဇော်..ထောင်ပိုင်ကြီးတို့ရဲ့ ဒုတ်တွေလိုဘဲ ရှားပါးစပ်နဲ့ အပြည့်ဖြစ်နေသည် ..။ ရှားလဲ ဘယ်ဘ၀က ကုသိုလ်လဲ မသိ ..။ တွေ့လိုက်တဲ့ ယောက်ျားတွေက လီးကြီးသည် ..။ အထစ်ကြီးကို ဖွဖွလေး ငုံလိုက် လျာလေးနဲ့ ထိုးဆွလိုက် နဲ့ ကစားပေးတော့ ဦးဖြိုးဝေမိုး အရသာ ရှိလွန်းလို့ တဟင်ဟင် နဲ့ ညည်းရင်း ယောင်ယမ်းပြီး ရှားခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တာ ခံလိုက်ရသည် ..။ “ အိုး…ကောင်းလိုက်တာ ရှားရယ် . . .” ရှားလဲ စိတ်ရှိလက်ရှိ သူကောင်းစေဖို့ ပညာကုန်သုံးပြီး စုတ်ပေးနေသည် …။ ဦးဖြိုးဝေမိုးသည် ရှားစုတ်ပေးတာတွေကို သဘောတွေ့နေသည် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး တအား တောင့်တလိုလားနေကြပြီမို့ လုပ်ငန်း စလိုက်ကြသည် ..။ ရှားကို ပက်လက်ပေါင်ကားခိုင်းပြီး ဦးဖြိုးဝေမိုး ရှားပေါင်ကြားမှာ နေရာယူပြီး သူ့တင်းမာလွန်းနေတဲ့ လက်နက်ကြီးကို ရှားရဲ့ စိုစွတ်တောင့်တနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ထဲကို ဖိသွင်းလိုက်လေသည် ..။
ရှားလဲ သူ့ခါးကို ဆွဲဖက်လို့ သူ့လိင်တန်ကြီး တထစ်ထစ် နဲ့ အင်္ဂါစပ် အဖုတ်ထဲ ၀င်လာတာကို ပေါင်တန်တွေ ဖြဲကားကာ ခံယူလိုက်သည် ..။ ရှားရဲ့ အင်္ဂါစပ် အတွင်းသားတွေက ဦးဖြိုးဝေမိုးရဲ့ လိင်တန်ကို ရစ်ပတ် ဆွဲညှစ်ထားတာကြောင့် ဦးဖြိုးဝေမိုးသည် ကျပ်တည်းတဲ့ အရသာကို ခံစားမိနေရပြီး ထိုးသွင်းလိုက်တိုင်း ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်း ထိမိတဲ့ အရသာထူးတွေ ခံစားရတာကြောင့် တချက်ပြီး နောက်တချက် အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးဆောင့်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရှိန်မြင့် သွက်လက်လာပြီး တဖန်းဖန်း နဲ့ ကြုံးကြုံးဆောင့်လေပြီ …။
“ အား…အား….အား….အား……..အား….အင်း…အင်း…အင်း……….” အားယူသံ..ညည်းငြူသံ…အသားချင်း ထိရိုက်သံတွေ ဆူညံလာပြီး ဦးဖြိုးဝေမိုး တရှူးရှူး နဲ့ ဖင်ကို ကော့ကာကော့ကာ နဲ့ ဆောင့်ထည့်နေသည် ..။ ရှားလဲ အောက်မှနေပြီး တင်ပါးကြီးတွေကို စကောဝိုင်း ဝှေ့ရမ်းပေးနေပြီး ဦးဖြိုးဝေမိုး ဆောင့်ထည့်လိုက်တိုင်း သူကလည်း ပင့်ပင့်ပေးသည် ..။ နှစ်ယောက်သား စိတ်တူကိုယ်တူ နဲ့ ချစ်ခရီး ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရောက်အောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးကန်းကြလေရာ မကြာခင်ဘဲ လမ်းဆုံး ရောက်ဖို့ အလင်းရောင် ပြပြလေး စမြင်လိုက်ရသောအခါ ဦးဖြိုးဝေမိုးလဲ အားသွန်ကာ အားကုန် ဆောင့်ထည့်လေတော့သည် …။
“ အို..ကိုကြီး..ကိုကြီး ….ဆောင့်ဆောင့်….တအား…တအား…ရှား ကောင်းလာပြီ..တအား ကောင်းလာပြီ…ဆောင့်…ဆောင့်…….” နဲ့ ရှားလဲ အော်ဟစ်နေမိလေသည် …။ ရှားရဲ့ အင်္ဂါစပ်အတွင်းသားတွေကလည်း ရှုံ့ချီပွချီ နဲ့ ညှစ်ဆွဲယူနေသောကြောင့် ဦးဖြိုးဝေမိုးလည်း ထူးခြားတဲ့ အရသာနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတော့ကာ ဆက်လက် ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ ရှား နဲ့ အတူတူ ပြိုင်တတူနီးပါး တချိန်ထဲ ကာမအထွဋ်အထိပ်ကို တက်လှမ်း ရောက်ရှိသွားရလေသည် …။ “ အို…ရှား…..ရှား….ရှား…ကောင်းလိုက်တာ ရှားရယ် ………” သုတ်ရေတွေ တပုံကြီး အချက်ပေါင်းများစွာ ရှားရဲ့ အဖုတ်ခေါင်းထဲ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး ဦးဖြိုးဝေမိုး …ချွေးတွေ တကိုယ်လုံး စိုရွှဲလျက် ရှားနဲ့အင်္ဂါချင်းစွပ်တက်ရက်ကြီး ငြိမ်ကျသွားလေတော့သည် ..။